Joplin, ramangwana rinotsiva Evernote yeGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Chimwe chezvikumbiro zvakakura zvevashandisi vazhinji kune iyo Gnu / Linux desktop ndeyokuve neimwe nzira kuna Evernote yekugadzirisa manotsi avo uye kuayananisa pamwe neabo smartphone uye mamwe makomputa. Kusvikira nguva isiri yapfuura ivo vaisavapo zvakawandisa sarudzo uye mazhinji acho aivhiringidza kana kuvhiringidza asi ichokwadi kuti sarudzo inonakidza uye ine simba kwazvo yakabuda inonzi Joplin uye pamwe chinotsiva chikuru cheEvernote.
Joplin chirongwa chakavhurika sosi icho ine mutengi weGnu / Linux, Windows, macOS, iOS uye Android. Izvo zvinoita kuti ive nematanho mashoma akanaka kune vashandisi vazhinji. Iyo Joplin dhatabhesi haina kuchengetwa pane imwecheteyo mutengi asi pane iyo faira inoiswa kune gore rekuchengetedza sevhisi. Muchiitiko changu ndasarudza dropbox, asi isu tinokwanisa kushandisa Nextcloud, Rimwe Dhiraivha, iro rakaomesa dhiraivhu pacharo kana webhu dav. Iyi faira yakavharidzirwa, saka zvinyorwa zvedu zvakanyorwawo.
Nezve mutengi iye, Joplin yakakamurwa kuita maviri skrini kunyangwe isu tichigona kuzviita. Kune rimwe divi kune mabhuku ekunyorera ane zvinyorwa zvavo uye kurudyi kwedu tichawana chinyorwa chimwe chete. Mutsamba imwe neimwe tichawana yekugadzirisa menyu kushambadza iyo noti asi isu tinofanirwa kutaura izvozvo inotsigira kumaka, ndiko kuti, tinogona kugadzira zvinyorwa mukumaka. Tinogona zvakare kubatanidza mafaera nemifananidzo mune chero fomati.
Joplin inotsigira zvizere Evernote Notes, zvichiita kuti zvive nyore isu tinogona kutumira kunze uye kuendesa kuJoplin usina kana dambudziko kana kurasikirwa nedata.
Joplin yakasununguka zvachose uye ine chiitiko chinoshanda kwazvo, mumavhiki maviri apfuura ndakagamuchira zvigadziriso zvina. Dambudziko chete randakasangana naro parizvino nderekuti Joplin inoiswa mune yeapplication fomati uye izvo zvinoita kuti mamwe mapurogiramu akaita sePlank asanyanyoenderana neJoplin asi inogona kugadziriswa zvakakwana.
Joplin inogona kuwanikwa kuburikidza iyo Github repository webhusaiti asi isu tinogona zvakare kuiwana muiyo Play Store uye muApp Store.
Ini pachangu ndakaedza ese Evernote naJoplin pamwe nedzimwe sarudzo manotsi uye ndinofanira kutaura izvozvo Ndakashamiswa zvinonakidza nekatsamba mutengi, sezvo ichienderana nekukurumidza, iri openource solution uye nekutenda kune kamera yekamera isu tinogona kuve nechigadzirwa chikuru chekushandisa. Jotplin chishandiso chemahara, saka Wadii kuyedza chirongwa ichi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Joplin, ramangwana rinotsiva Evernote yeGnu / Linux